Hakim Ziyech oo go’aamiyay mustaqbalkiisa Chelsea… (Miyuu doonayaa inuu ka tago kooxda?) – Gool FM
(London) 23 Abriil 2021. Shabakada caalamiga ah ee “Goal” ayaa waxay shaacisay in xiddiga reer Morocco iyo kooxda kubadda cagta Chelsea ee Hakim Ziyech uusan dooneynin inuu ka tago garoonka Stamford Bridge, inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga, kaddib markii magaciisa lala xiriiriyay inuu ka tagayo Blues.
28 jirkan ayaa ku biiray kooxda reer London ee Chelsea suuqii xagaaga ee la soo dhaafay, isagoo kaga yimid naadiga Ajax, lacag dhan 40 million euros.
Qof walba wuxuu filayay in Hakim Ziyech uu ku sameyn doono Chelsea isla bandhigii cajiibka ahaa uu ka sameeyay kooxda Ajax, laakiin xiddiga reer Morocco ayaan wali ku guuleysan inuu si joogto ah uga qeyb galo kulammada Blues, madaama uu kulammadii ugu badnaa ee xilli ciyaareedkan uu la ciyaaray kooxda reer London isagoo badel ku yimid.
Haddaba warbaahinta ayaa xilliyadii lasoo dhaafay waxay muujinayeen in maamulka Chelsea ay ka fikirayaan inay iibiyaan Hakim Ziyech xagaaga, sababa la xiriira in adeegiisa aan loo baahneyn muddada soo socota, gaar ahaan maadaama uusan wali helin kalsoonida macalinka reer Germany ee Thomas Tuchel.
Si kastaba ha noqotee, shabakadda “Goal” ayaa lagu xusay in xiddiga reer Morocco iyo kooxda kubadda cagta Chelsea ee Hakim Ziyech uusan xitaa ka fekerayn inuu ka tago Chelsea, waxayna wararka intaas ku darayaan in ciyaaryahanka uu aad ugu faraxsan yahay inuu la joogo kooxda reer London.
Waxaa xusid mudan in qandaraaska Hakim Ziyech ee Chelsea uu dhacayo xagaaga 2025, ilaa iyo haatanna xilli ciyaareedkaan, wuxuu kaqeyb galay 31 kulan, wuxuuna dhaliyay 5 gool, 4 gool kalena wuu caawiyay.